Amụma nzuzo - Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd.
1. Anyị ga-eji ozi nkeonwe anakọtara iji mejuputa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị dịka ndokwa nke amụma nzuzo a.
2. Mgbe ị na-anakọta ozi nkeonwe gị, anyị ga-achọpụta data site na teknụzụ teknụzụ.Ozi ewepụrụ agaghị amata isiokwu ozi nkeonwe.Biko ghọta ma kwenye na n'okwu a anyị nwere ikike iji ozi ewepụrụla;na-enweghị ikpughe ozi nkeonwe gị, anyị nwere ikike inyocha nchekwa data onye ọrụ wee jiri ya mee ihe n'ahịa.
3. Anyị ga-agụta ojiji nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị ma nwee ike ịkekọrịta ọnụ ọgụgụ ndị a n'etiti ọha ma ọ bụ ndị ọzọ iji gosipụta usoro ojiji nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị.Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ndị a anaghị agụnye ozi ọ bụla nke onwe gị.
4. Mgbe anyị gosipụtara ozi nkeonwe gị, anyị ga-eji ozi gụnyere ngbanwe ọdịnaya na amaghị aha iji mebie ozi gị iji chebe ozi gị.
5. Mgbe anyị chọrọ iji ozi nkeonwe gị maka ebumnuche ndị ọzọ nke amụma a kpuchirighị, ma ọ bụ maka ozi anakọtara site na ebumnuche maka ebumnuche ndị ọzọ, anyị ga-arịọ gị maka nkwado gị tupu oge n'ụdị ụzọ iji mee nlele.
3d welded Panel nsu, Ihe ndozi Ugboro abụọ Waya Panel Mkpuchi ntụ ntụ, Austrịa Y Post, Ọnụ ụzọ ámá efere e ji achọ mma, Ọnụ ụzọ ámá ọkọlọtọ, Bracket,